रिचार्ज कार्डको नम्बर मेटियो ? यसो गर्नुहोस् – Sandes Post
रिचार्ज कार्डको नम्बर मेटियो ? यसो गर्नुहोस्
April 5, 2022 664
काठमाडौं । पछिल्लो समय डिजिटल प्रणालीबाटै मोबाइलमा रिचार्ज गर्नेको संख्या बढ्दा नेपाल टेलिकमकाे रिचार्ज कार्ड किन्ने प्रयाेगकर्ताकाे संख्या घटेकाे छ ।
यद्यपि विभिन्न ठाउँ र उमेर समूहका प्रयोगकर्ताले अझै पनि रिचार्ज कार्ड नै किन्ने गरेको पाइन्छ ।
कोट्याउने क्रममा रिचार्ज कार्डकाे पिन नम्बर मेटिन सक्छ । यस्ताे अवस्थामा कसरी रिचार्ज गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल टेलिकमले आफ्ना प्रयोगकर्तालाई सुविधा दिइरहेकाे छ ।
यसअनुसार रिचार्ज कार्डमा मेटिएर ६ वटा मात्रै पिन नम्बर बाँकी रहेको अवस्थामा पनि रिचार्ज गर्न सकिन्छ । यसअघि रिचार्ज कार्डको पिन नम्बर मेटिएमा कार्ड साट्न कम्पनीको काउण्टरमै पुग्नु पर्ने बाध्यता थियो ।
त्यसका लागि सुरुमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट मा जानुहाेस् । त्यहाँ क्विक लिंकभित्र ‘पिन रिकभरी‘ अप्सन दिइएको छ ।
उक्त अप्सनमा गएर त्यहाँ मागिएको तथ्याङ्क भरी आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसका लागि कार्डको सिरियल नम्बर भने आवश्यक हुन्छ ।
ग्राहकले वेबसाइटमा गएर रिचार्ज कार्डको सिरियल नम्बर, १६ अंकको रिचार्ज कार्डको पिनमध्ये बाँकी रहेको (कम्पीमा ६ वटा) पीन नम्बर र रिचार्ज गर्नुपर्ने मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । देखिएको पिन नम्बरलाई कार्डमा उपलब्ध गराइएको क्रमसँगै राख्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थात मेटिएको अंकमा ‘एक्स’ चिन्न राख्ने र अन्य बाँकी जस्ताको तस्तै उल्लेख गर्नुहोस् । जस्तो पीन नम्बरको ढाँचा ०९८७६५४३२११२३४५६ रहेकाे छ र त्यसको बीचका केही अंकहरु मेटिएको छन् भने, त्यहि अनुसार ०९८xx५४३x११xx२३xx५६ रुपमा राख्नु पर्ने हुन्छ ।
अनलाइनबाट यसरी बढीमा १० पटकसम्म प्रयास गर्न सकिने सुविधा कम्पनीले दिएको छ । १० पटकसम्म प्रयास गर्दा समेत नभएको खण्डमा भने कार्ड लिएर कम्पनीको काउन्टरमै पुग्नुपर्ने टेलिकमले जनाएको छ ।
याे सुविधाबाट ग्राहकले घरमै बसी आफूलाई परेको समस्याको समधान गर्नसक्ने कम्पनीको विश्वास छ ।
Prevनेपालकै धेरै सब्सक्राइबर हुने मध्येको युट्युब च्यानल ओएसआर डिजिटल ह्याक
NextRussian Army मा नेपाली लैजाने, एक लाख ३४ हजार सेना भर्ती गर्दै रुस
“रवी लामिछानेले दिए, अन्य दललाई, कडा दनक, सबै पार्टी छोडेर बालेेेन लाई, समर्थन गरि बाटोखाली गर्न आग्रह ।